နေ့စွဲ - ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်
မြန်မာပြည်တွင်း၌ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို စွမ်းစွမ်းတမံ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ဆောင်ရွက်နေသူများကို ပြည်ပရောက် တိုင်းရင်းသား မြန်မာမိသားစုများက လေးစားဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသသော ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည်ဆုဖြင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်ကာ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည်ဆုရရှိသူကို ဂုဏ်ပြုလွှာဆုတံဆိပ်များနှင့်အတူ ငွေသား (ဒေါ်လာ) တစ်သောင်း (US$ 10,000.) ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင်နေထိုင်လျက် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့အတွက် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ် နာခံကာ စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်နေသော၊ ကျယ်ပြန့် ထိရောက် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော၊ လူ့ဘောင်လောက နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် စံပြဖြစ်စေမည့်၊ လူချွန်လူမွန်များကို အမည်စာရင်း တင်သွင်း ခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုနိုင်ကြပါသည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၅) ရက် အထိ လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုနိုင်ရန် အချက်အလက်များ စုဆောင်းပါ။
ပြည့်စုံနိုင်သမျှ ပြည့်စုံအောင် အချိန်ယူဖြည့်စွက်ပါ။
သင့်နှလုံးသားထဲမှ လူမှုရေးသူရဲကောင်းအကြောင်းကို ခံစားရသမျှ ဝေငှပါ။
သင်မျှဝေပေး သော ခံစားချက်တို့မှာ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသူအတွက် သင်၏ဂုဏ်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကလည်း သင်ရေးသားတင်သွင်းသော ဂုဏ်ပြုခြင်းကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ လေးနက်စွာ ဖတ်ရှုလေ့လာသွားမည် ဖြစ်ပြီး ဆင့်ပွားဝေမျှ ဂုဏ်ပြု တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လိုအပ်သောအချက်အလက်များဖြင့် ပြည့်စုံသည့် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း များအတွက် သင့်အီးမေးလ်ကို ဆက်သွယ်လျက် ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံရရှိပါကြောင်း အတည်ပြု ပြန်ကြားပေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ မိမိကိုယ်ကို မိမိ အမည်စာရင်းတင်သွင်းလိုပါက သင့်လိပ်စာအပြည့် အစုံ၊ အီးမေးလ် လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။ ဂုဏ်ပြုပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှ သင့်ကို ဆက်သွယ် အတည်ပြုချက် ရယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းလို့ရပါသလဲ?
ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံကာ လူမှုရေးလုပ်ငန်း များကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေသူ၊
ကျယ်ပြန့် ထိရောက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊
လူ့ဘောင်လောကနှင့် နိုင်ငံသားများအတွက်စံပြ ဖြစ်စေသူများကို
အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံအောင် စုံစမ်းဖြည့်စွက်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဂုဏ်ပြုပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ လေ့လာ၊ ဆက်သွယ်၊ စုံစမ်းသွားမှာဖြစ်ပေမယ့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှု များ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၃။ အမည်စာရင်းဘယ်မှာတင်သွင်းရမှာလဲ ?
ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ခြေက send(ပေးပို့ပါ) ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ရောက်အောင်ပို့လို့ရပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအတိုင်း
P.O. Box 1276, Baldwin Park, CA 91706, U.S.A ကို ပို့ပေးပါ။
လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များနဲ့ ပြည့်စုံတယ်၊ ရွေးချယ်ရေးမူဝါဒများနဲ့လည်း ကိုက်ညီ တယ်ဆိုရင်တော့ ငြင်းပယ်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များကလည်း မပြည့်စုံ၊ ရွေးချယ်ရေးမူဝါဒများနဲ့လည်း ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီအမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းကို လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၆။ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ပါသလဲ?
ပြည်သူအများအဆိုပြုတင်သွင်းလာကြသည့် အမည်စာရင်းများထဲက တဦး (သို့) တဖွဲ့ကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းဌာနခွဲအသီးသီးက ဆန္ဒမဲများဖြင့်ရွေးချယ်သွားပါမယ်။
၇။ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုပွဲတက်ရောက်ခွင့်ကို ဘယ်လိုရယူရပါမလဲ?
ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပတဲ့မြို့က ဆက်သွယ်ရမယ့်စာရင်းပါ တဦးဦးကို ဆက်သွယ်လျက် ဂုဏ်ပြုပွဲအတွက် ထိုင်ခုံ နေရာကို ကြိုတင်ရယူနိုင်ပါတယ်။ ။
၂ဝ၁၄ အတွက် ဆန္ဒပြုရန် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ
မိမိ၏လိပ်စာ(မြို့၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံ)
၄င်း၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် ထူးခြား၊ ပြောင်းလဲ၊ ကောင်းမွန်လာမှုများ(*)
၄င်းကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုလိုသည့် မိမိဆန္ဒနှင့် ခံစားချက်(*)
Last modified on Saturday, 05 April 2014 18:41
More in this category: « ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း (ကိုရီးယားဌာနခွဲ) ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း (၂/၂၀၁၂)	ပဉ္စမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပမည့်ရက် ကြေညာခြင်း »
You are here: Home သတင်းနှင့်မှတ်တမ်း Documentations ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Announcements အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂ဝ၁၄-ဆုပေးပွဲ) နေ့စွဲ - ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်